November 21, 2020 2027
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ । पढाइ-लेखाइमा प्रगति हुनेछ । बौद्धिक प्रतिस्प&र्धामा विजयी भइनेछ, नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । ठूला-बडाको आशीर्वादले रो’किएको काम बन्नसक्छ । आत्मबल बढ्ने छ । शत्रुहरू पराजित हुनेछन । मातापिता र अभि-भावक वर्गको आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ । समाज-सेवाका कामबाट लाभ हुनेछ ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) – पारिवा-रिक सम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ । हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्ति’को विचारले प्रभावित तुल््याउन सक्छ । बन्द-व्यापार र पेसा-व्यवसायका क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको वाता-वरण बन्नेछ । नोकरी अथवा व्यव:सायसँग सम्बद्ध कुनै ठोस परिणाम देखा पर्नेछन । जग्गा-जमिनको कारो-बार गर्दा राम्रो प्रतिफल आउन सक्छ । सामा-जिक क्षेत्र र नोकरीबाट मान+सम्मान मिल्नेछ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) – स्वास्थ्य कमजोर रहनाले चिताएको काम गर्न नसकिएला । जिम्मेवारी भने बढिरहने देखिन्छ । बाध्यताले अ’नावश्यक अल-मल बढाउन सक्छ । सहयो-गको आशा देखाउनेहरू-बाटै धोका पाइ’एला । व्यावसायिक काममा पनि खर्च बढ्नेछ । अरूका काममा श्रम तथा बुद्धि खर्चनु-पर्ला । आस मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ । सानो प्रयत्नले ठूलो काम सम्पा:दन हुनेछ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) – गृहिणीले मानसिक तनाव, व्यापारीले घाटा, विद्यार्थी’ले अनावश्यक बखेडा र कर्मचारीले अपजस व्य’होर्नु पर्छ । यात्रा घातक बन्न सक्छ, सचेत र सावधान भई ड्राइभिङ गर्नुपर्छ अनि लामो यात्रामा जानु हुँदैन । सामाजिक र परोप’कारका मार्गमा अवरोध हुनेछ । स्वास्थ्य-प्रति समेत सचेत रहनु होला ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) – दाम्प’त्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ । आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ । नयाँ सवारी साधन प्राप्ति’को योग पनि छ वा कतै रमाइलो यात्रामा निस्कन सक्नुहुन्छ । आतिथ्यपूर्ण सम्मान र मिठो भोज’नको प्राप्ति हु’नेछ । विपरीत’लिङ्गी मित्रसँग मन फुकाएर आफ्ना कुरा राख्न सकिने स’मय छ । धार्मिक, सामाजिक वा माङ्ग’लिक कर्ममा सहभागी भइनेछ ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) – तर्क, विवाद र प्रतिस्पर्धामा पकड भएको राम्रो दिन छ । अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको प्रतिस्प’र्धामा विजयी भइनेछ । कार्यक्षेत्रमा’ अरुले गरेभनेका कुरा’मा चित्त नबुझ्न सक्छ, संयमता अपना’उनु राम्रो हुनेछ । रमाइलो यात्राको सम्भावना छ र त्यसबाट दीर्घकालिक फाइदा पुग्नेछ । आर्थिक र व्यवसायिक सम’स्या समाधान हुनेछन । स्वास्थ्य’ सबल रहने छ ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) – छोरा’छोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ । दाजुभाइको प्रगतिको समाचार सुन्न पाइन्छ । बौद्धिक क्रियाकला’पमा दिलचस्पी जाग्नेछ, लेखन, प्रकाशन र ज्ञानगुनका क्षेत्रमा सक्रियता बढ्ने छ । प्रावि’धिक र सृज’नात्मक सफलता मिल्नेछ । साथीह’रूसित बौद्धि’क र तार्किक विषयमा छलफल हुनेछ । व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त हुनेछ ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) – घरायसी कामध’न्दाका लागि खट्नु पर्ने छ । सन्तानपक्षको मायामा कमी आउने छ । मनोरञ्जन र खेलवा’डप्रति मनको आकर्ष’ण बढे पनि इच्छा पूरा गर्न सकिंदैन । रोमान्स र प्रेमप्रसङ्गमा समेत नरमाइलोपन आउने छ । दबाब र तनाव बढेको मह’सुस हुनेछ । ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ । जिद्दीपनाले गर्दा काम बि’ग्रने डर छ ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) – नयाँ का’म सुरु गर्ने समय छ । व्यापारमा मनग्ये धनलाभ हुनेछ । साथीभाइले पनि राम्रै सहयोग जुटाउनेछन । नयाँ उद्योग वा रचनात्मक काममा जुट्ने समय छ । परिश्रमअनु’सार उपल’ब्धि पनि राम्रै पाइए’ला । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन । कृषिक्षेत्रमा भने अलि बढी परिश्रम र लगानी गर्नुपर्ला । नयाँ कारोबार वा साथी’भाइबाट बढी फाइदा लिने समय छ ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) – आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात’लागी हुने समय छ । गरेका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ । श्रमको उचित मूल्याङ्क’न हुनेछ । पढाइमा प्रगति हुनेछ । मिष्ठान्न भोजनको अवसर प्राप्त हुने योग छ । मनमा बसाइ सर्ने, सरुवा हुने, स्थान परि’वर्तन अथवा व्यवसा’य वा पेसामा परिवर्तनको धारणा पलाउन सक्छ । नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) – आजको दिन हाँसखेल र मनोरञ्जन’पूर्ण समय हो । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै अध्ययन–अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगति’को खबर सुन्न पाउनु हुनेछ । आर्थिक पक्ष सुदृढ बन्नेछ । कानुनी वा प्रतियोगितात्मक क्रियाक’लापमा विजय प्राप्त हुनेछ । मनमा दोधारको अवस्था सि’र्जना हुनसक्छ । पारिवारिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । व्यव’सायिक क्षेत्र लाभप्रद रहने छ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) – ताके’का काममा बाधा हुनेछ । नयाँ ठाउँमा आर्थिक लगानी गर्नु उपलब्धीमूलक हुँदैन । सामान हराउ’ने वा चोरी हुने सम्भावना छ । नि’यमित खर्चसमेत बढ्ने योग छ । आर्थिक सङ्क’टले मनमा अशान्ति र छट’पटी व्याप्त हुने छ । शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गको कमी हुनेछ । सवारी साधन चलाउँदा वा बाटो काट्दा होस राख्नु’पर्छ । टाढाको यात्रा फलदायी हुँदैन ।
Prevनेपालमा आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस् जिल्लागत विवरण
Nextआज मंसिर ७ गते आईतबार तपाईंको दिन कस्तो रहन्छ ? हेर्नुहोस् तपाईंको राशिफल
राजेन्द्र खड्गीले हिन्दिमै दिए सुधीर चौधरीलाई कडा दनक(भिडियो सहित)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (79329)
भर्खर बिहे गरेकी स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (66639)
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (59963)
बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी) (58837)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (58390)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (58347)
आँचलले लेखिन् आलोचकहरुलाई मन रुवाउने पत्र, पलको विषयमा यसो भनिन् (भिडियो) (53704)
वीर अस्पतालमा आँखा झिकि’एको भन्ने शवको भिडियो बाहिरियो, यस्तो रहेछ भिडियो..हेर्नुहोस्.. (53517)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (49594)
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मुद्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि..(भिडियोसहित) (47816)
नेपाल टेलिकमको मोबाइल नेटवर्कमा बिहानैदेखि देखियो यस्तो सम`स्या